Esi agba agba foto na oji | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Foto, Nkuzi
Anyị niile nwere onye ikwu meworo okenye karị, ma ha bụ nne na nna ochie ma ọ bụ ndị nne na nna ochie ọkachasị, ndị na-achọ ịhụ ụbọchị pụrụiche, ma ọ bụ ncheta agbamakwụkwọ, ncheta ọmụmụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ga-eme ka anyị nye onyinye. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka onyinye anyị pụọ iche, onweghi ihe kariri foto.
N'ịbụ ndị toro eto, o yikarịrị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto ndị a, ọkachasị mgbe ha dị obere, nọ na oji na ọcha. Ọ bụ ezie na ndị dị iche iche nke foto ha nwere amara pụrụ iche, anyị nwere ike inye ya ihe pụrụ iche ma nwee mmetụta uche dị ukwuu site na iwepụ afọ ole na ole site n’inye ha agba.
O doro anya, anaghị m ekwu na anyị raara onwe anyị na Photoshop ịga agba agba ọ bụla nke ebe nke foto na-eche n'echiche agba nke ihe oyiyi agba nwere ike igosi, usoro eji ọtụtụ afọ gara aga iji mee ihe nkiri ojii na ọcha, ọrụ na-agwụ ike nke metụtara eserese niile nke ihe nkiri ahụ (na sinima 1 nke abụọ bụ okpokolo agba 24) .
Iji nwee ike ịcha foto na agba ọcha, yana ihe nkiri oji ọcha, ọ ga-ekwe omume ugbu a n'ụzọ dị oke ọsọ, ebe ọ bụ na enye iwu ya zụrụ software (mmụta miri emi) iji chọpụta ihe na-acha ntụ na-akpaghị aka na onyonyo ma tụgharịa ha na agba nke ụdịdị dị iche iche (ọgụgụ isi).
1 Digise ihe oyiyi
2 Colorize foto oji na oji site na web na Colourise
3 Colorize foto ojii na oji site na mkpanaka gi
3.2 Nsogbu (iOS)
3.3 Colorize Images (gam akporo)
4 Colorize foto oji na nke oji na Photoshop
Digise ihe oyiyi
Enwere ọtụtụ ngwa / ọrụ maka ịse agba ochie foto, ma n'ụdị ọrụ weebụ yana n'ụdị ngwa maka desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka. Mana nke mbu, ọ bụrụ na anyị enweghị foto ahụ nyocha Ihe anyị chọrọ ịtụgharị bụ iji ngwa FotosScan nke Google, ngwa dị maka iOS na gam akporo.
FotoScan site na Google, na-enye anyị ohere i withomi foto ochie na igwefoto igwe onyonyo anyị, na-akpụzi ha, na-agbakwunyeghị echiche ma weghachite ha dị ka o kwere mee (na-enweghị ọrụ ebube). Ngwa a dị maka nbudata kpamkpam n'efu site na njikọ ndị dị n'okpuru maka iOS na gam akporo.
FotoScan site na Foto Googlefree
FotoScan site na Foto Google
Ọ bụrụ na anyị jikwa Google Foto, foto niile a ga-ebugo ya na Google Photos na akpaghị aka, nke ga-enyere anyị aka inweta ha ngwa ngwa site na kọmputa anyị, ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ iji ọrụ weebụ ma ọ bụ ngwa desktọọpụ, na-enweghị iziga ha site na mail, bluetooth, na-ebudata ha na eriri na kọmputa anyị ...
Colorize foto oji na oji site na web na Colourise
Dị ka ọtụtụ ọrụ / ngwa ndị na-enye anyị ohere ịcha foto oji na ọcha, anyị ga-enweta nsonaazụ ka mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri ihe oyiyi na mkpebi kachasị elu. Otu ihe dị mkpa metụtara nzuzo, anyị na-ahụ ya na onyonyo ndị anyị na-ebugo na webụsaịtị a anaghị adịgide na sava ahụ, otu nsogbu nkịtị nke ụdị ngwa a.
Colourise na-arụ ọrụ dị mfe. Naanị anyị ga-adọkpụrụ ihe oyiyi ahụ anyị chọrọ ịtụgharị na ntanetị nke egosiri na ibe weebụ gị, na chere sekọnd ole na ole ruo mgbe ọ na-akpaghị aka uploaded na acha.
Colorize foto ojii na oji site na mkpanaka gi
MyHeritage bụ ngwa dị maka ma iOS na gam akporo nke na-agbanwegharị na-akpaghị aka foto anyị na oji na nke ọcha na agba. Nke a abụghị ọrụ bụ isi nke ngwa a, ngwa ezubere iji mepụta osisi ezinụlọ, osisi ebe anyị nwere ike iji onyogho ndị anyị na - acha na ya.
Ihe oyiyi niile anyị na-agbanwe, anyị nwere ike ibupụ ha na ọba foto anyị inwe ike iji ha maka ebumnuche ọ bụla na-enweghị njikọ na ngwa ahụ. Naanị ma ọ bụ na ọ gụnyere obere akụkọ akụkọ na aha ngwa ahụ bụ akụkụ aka nri ala nke ihe oyiyi ahụ agba.
Ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, n'etiti nhọrọ niile nke ngwa ahụ na-enye anyị, pịa Foto.
Na-esote, pịa na Tinye foto na anyị họrọ anyị foto album nke oyiyi anyị chọrọ agba.
Ọ bụrụ na anyị enwetaghị ya na mbụ, anyị nwere ike ime ya ozugbo na ngwa ahụ site na ịpị Nyochaa foto na dọkụmentị (Agbanyeghị na a ga-enwetara nsonaazụ kacha mma na FotoScan nke Google.
Ozugbo emere ka ihe oyiyi a na-acha na agba nke ngwa ahụ, pịa ya.
N'ikpeazụ, anyị ga-pịa acha gburugburu dị na elu Central akụkụ nke ihuenyo na sekọnd mgbe e mesịrị akakabarede a ga-rụrụ.
Ka anyị nwee ike ịlele nsonaazụ ya, ngwa ahụ gosipụtara anyị ahịrị kwụ ọtọ nke anyị nwere ike gaa site n’aka ekpe gaa n’aka nri iji hụ otú ọ dị tupu agba ya na otu ị dị mgbe mgbanwe ahụ gasịrị. Iji chekwaa ya na ọba foto anyị, anyị ga-pịa bọtịnụ nkekọrịta, bọtịnụ nke anyị nwekwara ike iziga ya site na email, WhatsApp ma ọ bụ ngwa ọ bụla ọzọ anyị tinyere na ngwaọrụ anyị.
Colorize bụ ihe ọzọ na ngwa nke gbadoro anya n’inye anyị ohere itinye agba na foto ojii na ọcha, foto ochie dịka nke aga. Na App Store anyị nwere ike ịchọta ngwa ndị ọzọ ga-enyere anyị aka ịse foto oji na ọcha, mana ogo ikpeazụ ha na-enye dị obere nke Enweghị m nsogbu itinye ya na edemede a.
Ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, pịa Iomi ma ọ bụ bulite foto.
Mgbe ahụ, anyị pịa Import anyị wee họrọ onyonyo nke ọbá akwụkwọ ahụ anyị chọrọ iji.
Mgbe sekọnd ole na ole, ọ na-ewe ogologo oge ma e jiri ya tụnyere ngwa / ọrụ ndị ọzọ nke m gosiri gị n'elu, ọ ga-ewetara anyị nsonaazụ ahụ.
Ihe oyiyi ahụ anyị nwere ike zoputa ya na ukwu anyị ma ọ bụ kesaa ya ozugbo site na email, WhatsApp ma ọ bụ ngwa ọ bụla ọzọ anyị rụnyere na kọmputa anyị.
Colorize Images (gam akporo)
Colorize Images bụ ihe ọzọ na ihe ngwọta na anyị nwere anyị nwere na gam akporo na tinye a ikwommiri nke na agba na oji na oyuyo foto. Nke a bụ naanị ngwa nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ụfọdụ ụkpụrụ iji gbanye onyonyo ahụ dị ka nsụgharị nsụgharị na iche, nke ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, anaghị arụ ọrụ ebube, ma ọ bụrụ na ọ na-enye anyị ohere inweta nsonaazụ kachasị mma anyị bụ enweghị obi ụtọ na mbugharị mbụ ị mepụtara ngwa ahụ.
Agba Ihe Osisi
Developer: Agba Ihe Osisi
Colorize foto oji na nke oji na Photoshop
Foto na-acha oji na oji na oji ma di mfe na ngwa / oru nke m kwuru n’elu. N’agbanyeghị na n’ọtụtụ oge, nsonaazụ ya bụ ihe a na-anabata karịa, oge ụfọdụ ọ nwere ike ọ gaghị anabata. Anyị kwesịrị ime otú ahụ gbanwee grayscale nke foto ma jiri ọrụ ndị a ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị nwere oge, ọtụtụ oge, ndidi na ihe ọmụma nke Photoshop, anyị nwere ike iji ọrụ a dị mma Adobe na-edezi, a usoro na-agwụ ike ma dị mgbagwoju anya nke anyị na-agaghị akọwa nke ọma n’isiokwu a. Mana iji nye gị echiche, maka foto ojii na oji na-acha ọcha, anyị ga-ahọrọ otu otu n'akụkụ niile nke foto anyị chọrọ agba.
Ozugbo anyị họpụtara ihe niile ga-enwe otu agba, anyị ga-emerịrị agba ọhụrụ jupụtara na agba (nke anyị chọrọ iji rụọ ọrụ na mpaghara ahụ). N'ihi na megharia agba ka onyunyo onyoghoNa panel ahụ, anyị ga-ahọrọ ụdị agwakọta agba ka agba wee jikọta mmewere anyị ahọrọ.
N'ikpeazụ, anyị ga-edozi ọdịiche nke mpaghara niile anyị ahọrọ ma tinye akwa agba site na Curves megharia ojii, akụkụ kachasị mkpa nke foto ojii na oji na nke ochie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Esi agba agba foto na oji
Poco F2 Pro: Ihuenyo ọzọ, arụmọrụ karịa na ọnụahịa ndị ọzọ